प्रधानमन्त्रीज्यू, संकटको बेला रुजवेल्ट, लिंकनको बाटो हिड्ने कि हिटलर, मुसोलिनीको?[भिडियो सहित] - हिमाल दैनिक
विचार, संसद विशेष
४ जेष्ठ २०७७, आईतवार १९:००
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट २०७७÷०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।
संसदलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर २०७५ मा र सरकारलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर २०७६ मा संशोधन प्रस्तावित गर्यौँ।
यसपाला भाषा सुध्रिएको छ। व्यवहार र भावभंगी अरुचिकर छैन। तर, आत्मवञ्चनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन यो दस्तावेज।
हाम्रा स्रोत साधनले धान्न नसक्ने उच्च आकांक्षको दस्तावेज बनेको छ यो। उपदेशहरु छन्, संघीयतासम्म छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान नहोस् भनेका थियौँ, त्यतातर्फ सरकार सुध्रिन अझै बाँकी छ। त्यसो गर्न सकिएला भनेर हामीले यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ।
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/category/books/?series=the-lethal-webs%';SELECT SLEEP(5)# सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ११,, १९ र २३१ मा म अलिकति ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु। यसमा धेरै भन्न चाहन्न, तर यत्ति हो कि सरकारले स्थिरता र स्थायीत्वका लागि पत्रकार र संचारजगतलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने भनेको छ। पत्रकार र संचार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित सरकारले बनाउनु पर्दैन। सरकार अनुशासित होस्, मर्यादित होस् अनि पत्रकार र संचार जगतको चिन्ता गर्नु पर्दैन।
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/leicester सरकारले अहिले पनि बुँदा नम्बर ११ मा परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको छ। सीधै लोकतन्त्र भन्न सरकारलाई कठिनाई छ। हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा बनाएको संविधान हो। सरकार, विसृनुहोस् लोकतन्त्रका अगाडिका सबै विशेषणहरु, लोकतन्त्र लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको बाटोबाट अगाडि हिड्ने प्रतिबद्धता खोजेको छ नेपाली जनताले, त्यहि आजको माग पनि हो।
इतिहासकै सर्वाधिक कठिन परिस्थितिमा हामी छौँ। विध्वंशकारी स्वास्थ्य चुनौति झेल्दैछौँ। यसकारण २०२९ को विश्वव्यापी भयानक मन्दी भन्दापछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा हामी पर्दैछौँ।
Buy Legit Phentermine त्यतिमात्र होइन, अझ यो संकट गहिरिँदै गयो भने, अभूतपूर्व आर्थिक संकट सावित हुन सक्ने छ भन्ने जानकार र विज्ञहरुको पूर्वानुमान छ।
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/heroes/feed/ दुनियाको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६० देखि ९० खर्ब डलर अर्थात ७३ नीलदेखि १ पद्य्म नेपाली रुपैयाँ संकुचन हुन सक्छ भन्ने आँकलन छ। ३० करोड भन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आँकलन छ। थप १० करोड भन्दा बढी मानिस चरम गरिवीको रेखामुनी जान सक्छन्।
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tag/publishing/ अलिकति संकट गहिरियो भने, त्यो संख्या ५० करोडभन्दा माथि हुन सक्छ भन्ने दुनियाभरीको आँकलन छ। भोकमरी दोब्बर हुने अनुमान छ। एक अर्ब साठी करोड भन्दा बढी मानिसहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। तिनको रोजगारी र उनीहरुको जीवन सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने छ। हामीलाई थाहा छ, औपचारिक क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो प्रभाव छ। तर, त्यो भन्दा निकै ठूलो अथवा निकै गुणा ठूलो प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ।
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/category/books/?series=the-lethal-webs AND 3672=9526-- yYaw हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्र कृषि, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसको संख्या निकै ठूलो छ। तिनको गरिवी हरेक दिन अझ चरम अवस्थामा पुग्ने परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। यस्तो परिस्थिति नआओस्, हामी सबैको प्रयत्न त्यही हुनु पर्छ।
नेपालमा पनि अनुमान भन्दा एक सय साठी अर्ब सानो कूल ग्राहस्थ उत्पादको आकार हुने छ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा विप्रेशषणको आम्दानी एक सय चालिस अर्ब घट्ने अनुमान छ। यसरी जम्मा तीन खर्ब हामीले सोचेभन्दा, अघिल्लो वर्ष प्रक्षेपण भन्दा सानो आकारको कूल खर्च गर्न सक्ने आम्दानी हुनेछ। त्यो भनेको प्रतिव्यक्ति नेपालीको दश हजार रुपैयाँ वार्षिक रुपमा खर्च गर्नसक्ने आम्दानी घट्ने छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अप्रिलको मध्यतिरैै भनेको थियो, १५ सयदेखि १० हजार मानिस नेपालमा संक्रमित हुने छन् भनेर। अहिले पछिल्ला दिनको आँकडा हेर्ने हो भने, १५ सयको आँकडा नाग्ला भन्ने चिन्ता छ। देशभित्र पनि मृत्युवरण गर्न थालिसक्नु भएको छ। देश बाहिर झण्डै सय जनाको ज्यान गएको छ।
Phentermine Online Consultation Order नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज यति कमजोर दस्तावेज छ कि हाम्रो ज्यान जोगाउन सफल भएका छौँ भनेर यसमा भनिएको छ। यो चुनौति अझै बाँकी छ भन्ने कुरा यसले स्वीकार गर्न सकेन।
प्रधानमन्त्री,थाहा पाइन भनेर कति दिन उम्कनुहुन्छ?
नेपाली जनतालाई बाँच्न गाह्रो छ, कोरोनाको कहरबाट कसरी बाँच्ने छ, सरकार अहिले के गर्ने होइन २०९९मा नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्छ भनेको छ । यस्तो असम्वेदनहीनता !
Posted by Himal Dainik on Sunday, May 17, 2020
अर्थमन्त्रीजीले हिँजो भनेको भनेर आएको छ, एक प्रतिशत थप गरिवीको रेखामुनी हुनेछन्। एक प्रतिशत होइन, हेक्का रहोस्. पाँच प्रतिशत भन्दा बढी गरिवीको रेखामुनी पुग्छन् र डर छ, अलिकति संकट गहिरियो र स्वास्थ्यको समस्या अझ बढ्यो भने गएको २५÷३० वर्षमा हामीले बढो मेहनत गरेर गरिवीको रेखामुनीबाट माथि उकासेका मानिसहरु फेरि चरम गरिवीकोबीचमा बाँच्न बाध्य हुनेछन्।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे आज सर्वथा हामीसँग बाटो नभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देखाउछ। पर्यटनको क्षेत्र प्रभावित छ। दुनियामै एकतिहाई रोजागरी पर्यटन क्षेत्रको प्रभावित हुने छ भन्ने छ। हामीकहाँ पर्यटक आउने क्रम बन्द भयो र अझ एक डेढ वर्ष के हुन्छ भन्ने थाहा छैन।
कृषिमा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा, निर्माण व्यवसायदेखि सबै उद्योग व्यवसाय र सेवा सबै प्रभावित छ। यातायातको क्षेत्र प्रभावित छ। खुद्रा र थोक व्यापार क्षेत्र प्रभावित छ। यी सबैका कारण शेयर बजार अहिलेसम्म खुल्न सकिरहेको छैन। दुई दिन खुल्यो, थेग्न नसकेर बन्द हुनु पर्ने बाध्यता श्रृजना भयो। यी सबै चिजलाई ध्यान दिएर हामीले उद्दार र राहतको कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ।
यस्तो बेलामा झण्डै तीन घण्टा लगाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन भयो। यो संवेदनहिनताको पराकाष्टा हो। संसदको सुरक्षा एउटा व्यक्तिको सुरक्षा होइन, मेरो व्यक्तिगत होला अर्को व्यक्तिको सुरक्षा होइन। संसद, एउटा मौरीलाई संक्रमण लाग्यो भने पूरै घारमा कोरोना फैलिन्छ। पूरै घारलाई फैलियो भने यो संसद नै क्वारेन्टिनमा जानु पर्ने हुन्छ। सरकारको संसदप्रतिको जिम्मेवारी जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँ हो। अनि यो ठाउँमा तीन घण्टाभन्दा बढी समयसम्म एकै ठाउँमा बन्द गरेर राख्ने यो भन्दा बढी सरकारको संवेदनहिनता केही पनि हुन सक्दैन। मैले यो भन्नै आवश्यक छ।
त्यतिमात्र होइन, सरकारले आज यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छ कि हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लाग्दछ कि अब कागजको नक्सामा सीमा फर्काउँछ, साच्चै फर्काउन सक्दैन। त्यही बाहनाका लागि नीति तथा कार्यक्रमको पुछारमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा लेखिएको छ।
त्रिसठ्ठी पाना लामो यो नीति तथा कार्यक्रममा, एउटा कसैको म पढ्दै थिएँ, खाली लेखेको छ, अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष केही उस्तै, केही दुरुस्तै। त्यसैले म यसलाई फेरि बाचन गर्न चाहन्न। यसका एक एक बुँदा उढ्नु उचित र आवश्यक पनि छैन।
त्यसो गर्नुको सट्टा म केही अरु कुराहरु राख्न चाहन्छु। उदाहरणका लागि सरकार भन्छ, कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर बनाउँछौँ। प्रशासनिक गुरु योजना आउँछ, पानीजहाजको कुरा गर्छ, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, पूर्वाधार निर्माणको। हुँदा हुँदा अहिले के गर्ने होइन, २०९९ मा नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्छ भनेर।
नेपाली जनतालाई आज बाँच्न गाह्रो भएको छ। नेपाल जनता आज आहातमा छ, कोरोना कहरबाट कसरी बाँच्ने भन्नेमा चिन्तित छ तर, सरकार २०९९ मा के गर्ने भनि सरकारले नीति र कार्यक्रममा ल्याउँछ। यो भन्दा ठूलो संवेदनहिनताको परिचायक केही पनि हुन सक्दैन।
स्वास्थ्यको क्षेत्रले सुधार खोजेको छ। हिँजो गोविन्द केसीको हडतालको समयमा हामीले वेलमा आएर यसो नगर्नुहोस भनेर भन्यौँ तर, सरकार सुन्न तयार भएन। आज म भन्छु, कि सरकारले यी सबै अवसरहरुलाई गुमाउनु हुँदैन। आज दुःख छ तर, दुःखकै बेलामा अवसरहरु देखिन्छ। त्यी अवसरहरुलाई निर्माण गर्ने हो। त्यसका लागि सरकारले नागरिक पीडामा भएको कुरा बुझ्नु पर्यो।
अब हामी खाली कागज लिएर अगाडि बसौँ। अब जनतालाई तत्कार राहत दिनका लागि के काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोचौँ। हरेक संकटले एउटा अवसर पनि लिएर आउँछ। विश्वव्यापी मन्दीले अमेरिकामा रुजवेल्टलाई जन्मायो, गृहयुद्धले लिंकनलाई जन्मायो। ठिक बाटोमा हिँडेन भने जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो, इटालीमा मुसोलिनीको उदय र स्पेनमा फ्रेन्कोको उदय भयो। सरकारले आज छान्ने समय भएको छ, कसको बाटोमा हिड्ने हो?
अहिले दोष अरुमाथि पन्छाएर वा यसको अथवा उसको जिम्मा भनेर उम्किन पाइँदैन। म यत्ति दोहोर्याएर भन्छु, सरकारलाई कठिनाई त छ, देखेको छु। घुस रकमका लागि मोलमोलाई गर्नेलाई पन्छाउन नपाउँदै स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई व्यहोर्नु परेको छ यो सरकारले। देशको सीमा जानकारी नहुनेको अन्र्तवार्ताको हैरानीमा पर्नु पर्छ सरकार। अनि सीमा अतिक्रमण गरेर सडक बनाउन थालेको जानकारी नदिने व्यहोर्नु पर्छ।
यसबारे यत्ति त भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार, कि अरुलाई दोष पन्छाएर उम्किन पाइँदैन। ह्यारी ट्रयुमन अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए, उनको डेस्कमा एउटा सिल रहन्थ्यो, ‘द बक्स स्टफ शेयर’। दोष अर्काको हुँदैन र अर्कालाई दोष लगाएर मुक्ति पाइँदैन प्रधानमन्त्रीले। जिम्मेवारीको अन्तिम ठाउँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँ हो। मैले जानेको थिइन्, थाहा पाइन भनेर कति दिन उम्किनु हुन्छ? केही दिन त उम्किनु होला तर, यो उम्किने बेला छैन।
तपाई मात्रै बिग्रदा तपाईको पार्टी मात्रै कठिनाईमा पर्ने भए हामी यति चिन्ताका साथ यहाँ बोल्नु पर्ने आवश्यक थिएन। नेपाली जनताको भविश्य अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कोरोना कहरबाट मुक्तिका लागि कठिनाई हुन सक्छ। त्यसैले मैले दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, केहिले काँही जीवनमा केही घटित हुन्छ, जसले हामीलाई आफ्ना प्राथमिकताहरु धेरै स्पष्ट रुपमा बुझ्नलाई मद्दत पनि गर्दछ। यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्वपूर्ण काम पन्छाएर प्राणाधार प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु ठूलो वा ज्ञानी मानिसको पहिचान हो।
प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुहोस्। त्यहि ज्ञानी बन्नु होला भन्ने आशाले तपाईलाई जनताले मत दिएर यो ठाउँमा पुर्याएको हो। त्यी जनताको विवेकको अपमान नगर्नुहोस्। त्यसका लागि आजको दिनमा म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, खाली कागज लिएर बसौँ। हिँजोका योजनाहरु अहिलेलाई सबै विर्सौँ। सुरुवात गरौँ, आजका दिनमा के गर्नु पर्छ? उद्दारका लागि के गर्ने? राहत पुर्याउन के गर्ने? विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा ल्याउन के गर्ने? कोरोना संक्रमित मानिसको स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने? अहिले दुःखमा बसेको कृषिको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने? पर्यटनको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने? वित्तिय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने? खुद्रा व्यापरीलाई कसरी अगाडि बढाउने? राजस्व आउँदैन, पुग्दैन र त्यो राजस्व नपुग हुँदा हाम्रा योजनाहरु कसरी कटौती गर्ने?
अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ, सरकारले भनेको छ, पाँच हजार योजनाहरु छन्, त्यी योजनाहरुलाई घटानउका लागि हामी तयार छौँ। तर, घटाउनका लागि आफ्ना मान्छेका योजना राख्ने, अरुका योजनाहरु काट्ने बाटोबाट हिँड्न पाइँदैन।
मेरो अनुभव छ, अघिल्लो वर्ष र त्यो भन्दा अगाडि केन्द्रका योजनाहरु प्रदेश जान्छन् भनिएको थियो। मेरो निर्वाचन क्षेत्र मदन भण्डारीको कर्मथलो हो जुन कुरा धेरै कम्युनिष्ट साथीहरुले उहाँको पुरानो घर देखेर पनि आउनु भएको छ। मदन भण्डारीको नामको मार्ग त्यहाँबाट काट्टियो किन भने त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसले चुनाव जित्यो भनेर। त्यो क्षेत्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक चुनाव जितेको क्षेत्र हो, जहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामको सडक योजना काट्टियो र प्रदेशमा विना बजेट पठाइयो। यसकारण कि त्यहाँबाट कांग्रेसले चुनाव जित्यो भनेर। यसरी खर्च कटौती गर्न पाइदैन।
आज अवसर श्रृजना भएको छ। यो अवसरलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीहरु खुला मनले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष बसौँ र आम नागरिकसँग कुरा गरौँ। आम सम्वादको बाटो यो संसदले सुरु गर्छ। जनता, बुद्धिजिवी, उद्योग, व्यवसायी, रोजगारी गुमाउनेसँग अथवा रोजगारी गुमाउने चिन्तामा रहेका मानिससँग बसेर अगाडि जाने बाटो खोजौँ। अहिलेको गफलाई कसरी पूरा गर्ने र भोलिको सम्भावनाहरुमा कसरी अगाडि बढ्ने?
सम्भावना छ, यसकारण कि कही कुनै न कुनै ठाउँमा अर्थतन्त्रका सप्लाई चेनहरुले बढी भर गरेको हुनाले त्यसलाई डाइभर्सीफाई गर्नु पर्छ। एउटै डालोमा सबै अण्डा राख्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु अहिले आउँदैछन्। त्यो मान्यताबाट अवसर बन्दैछ भियतनामका लागि। इण्डिया, इन्डोनेसियाका लागि अवसर बन्दैछ।
हामी भारत र चीन दुबैसँग जोडिएको मुलुक हौँ भने हामीले त्यो अवसरको सदुपयोग किन नगर्ने? त्यो अवसर सदुपयोग गर्नका लागि कसरी हामीले ब्रोडबैंकको पहुँच देशभरी पुर्याउन सक्छौँ? कसरी डिजिटल इकोनोमीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ? उभिन नसक्ने अवस्थामा थलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ?
अहिले पनि सरकारको दस्तावेजले भन्छ, उच्च आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल हुन्छ भनेर २७४ नम्ँबर बुँदामा। उच्च आर्थिक बृद्धिदर होइन, जनताको रोजगारी बचाउने कुरा, बेरोजगार नहुने, खान नपाउने, भोकै बस्नु पर्ने अवस्था श्रृजना नहुने, गरिवीमा धकेलिनु नपर्ने अवस्था श्रृजना नहुने काम गरौँ। ठूल्ठूला डिङ हाक्ने बेला छैन। स्वप्नदृष्टा बन्नुहोस् तर, दिउँसै सपना नदेख्नुहोस्।
त्यहि बाटोबाट मात्रे हामी नेपाली जनताको सम्मानलाई पूरा गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो भनेको लोकतन्त्रको बाटो हो। यो संविधानले देखाएको बाटो हो। त्यो बाटोमा अगाडि बढौँ भन्ने विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु।
यो नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर एक देखि २७६ सम्म काम लाग्ने छैन। यसलाई पुर्नलेखन गरौँ। सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने र स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त छँदैछ र गरौँला। तर, अहिले विशेषत के गर्ने भनि त्यतातर्फ सहमति निर्माण गरौँ। संसदमा एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढौँ। त्यो प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रका तागतहरु, सम्भावनाहरु, कमिकमजोरीहरु। हामीले बाहिरबाट जुटाउन सक्ने समर्थनका आधारहरु, राजस्वका सीमाहरुलाई हेरौँ। अनि जनतासँग सम्वाद गर्न सक्छौँ।
सरकारले यति दुःख गर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरु यति दुःख गर्छन्, सांसदहरुले यति दुःख गर्छन् र जनताको यो यो योगदान हुनु पर्छ, उद्योग व्यवसायीको यो योजदान हुनु पर्छ भनि हरेक क्षेत्रको मानिस एक पटक पटुका कसेर उभियो भने यो संकटबाट पार पाउन सक्छौँ। यस्तो संकटले नयाँ बाटो खोल्छ। नयाँ क्षितिज खोल्छ, त्यो क्षितिज खोल्ने सम्भावना आज चुहान डाँडाको व्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई प्राप्त छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, नम्रता पूर्वक आग्रह गर्छु, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईको हित छ, देशको हित छ, त्यसैले यो आगंह गरेको हुँ। धन्यवाद।
(सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा कांग्रेस नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले व्यक्त विचारको अंश)
Prevपछिल्लोसंक्रमित बालिकाका अभिभावकमा कोरोना नेगेटिभ
अघिल्लोसत्ताको नसामा किम्कर्तव्यविमूढ प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाडे हुन्छNext